Author: Nale Grokazahn
Dastuurka ayaa ugu sarreeya xeerarka dalka, xeer kasta oo aan isaga waafaqsanaynina, waxa uu noqonayaa waxba kama-jiraan. Xeerka ayaa caddeynaya ciqaabta ka dhalan karta somalilanc la’aanta waajibaadka ku xusan faqradda laad, 2aad, 3aad iyo 4aad. Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada. Xubintu geeriyooto ama uu ku yimaado xanuun suurto gelin waaya gudashada dastuur,a 2. Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka. Eedaysanuhu wuxuu xaq u Ieeyahay in go’aan maxkamadi ku ridday uu racfaan uga qaato maxkamadda ka sarraysa.
Qof kasta oo u dhashay Somaliland, kana issirran dadkii deggenaa dalka.
Madaxweynaha, ka dib marka uu la tashado Golaha Xukuumadda. Si dhallinyarada loogu xaqiijiyo koritaanka jidhka iyo maskaxda oo caafimaad qaba, korna loogu qaado barbaarintooda iyo dareenkooda Dawladdu waxay ahmiyad gaara siinaysaa horumarinta iyo dhiiri-gellinta ciyaaraha jidhka iyo isboortiga, kuwaas oo loo aqoonsan doono maadooyinka asaasiga ah oo ka mid ah manhajka waxbarashada dugsiyada dawladda iyo kuwa kale.
Madaxweynuhu waa madaxa Qaranka iyo Dawladda; waana astaanta dasuturka muwaadiniinta ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland.
Uu jabo shardi ka mid ah shuruudihii lagu soo doortay; ama uu gudan waayo xilkiisa. Xubnaha Guddida Culimadu waa inay yeeshaan shuruudaha hoos ku qoran: Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Guddidu waxay caddayntooda u gudbinayaan xafiiska codsiga caddayntu uga yimid ama Maxamadda Dastuurka wixii iyaga uga muuqda.
Xoghayaha gobolka ama degmada iyo dastuura waaxyaha ama laamaha Wasaaradaha ayaa xilka sii fulinaya iyagoo raacaya shuruucdoodii hore inta laga somailland dooranayo gole cusub.
Muwaadiniinta iyo shisheeyaha dalka deggeni waxay furan karaan dugsiyo iyo barnaamijyo waxbarasho iyo tababaro oo heer kasta ah oo waafaqsan xeerka warbarashada. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilkiisa 5.
Haddii uu arko in mashruuc-sharcigaasi ka hor imanayo qodob ama qodobo Dastuurka, waa inuu sidaa ku wargeliyaa Shir-guddoonka iyo Xeer-ilaaliyaha Guud oo u gudbin doona Maxkamadda Dastuuriga ah. Taliyayaasha ciidamada iyo Ku-xigeenadooda; r. Haddli loo baahdo hay’ado kale waa la dhisi karaa si xeerka waafaqsan.
Dhammaan xorriyaaka qofka waxa shardi ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasiloonida dalka ama xuquuqda qofka kale. Go’aan qaadasho ku timaadda talo-wadaag. Waayidda Xubinimada Golaha Guurtida. Haddii uu ku qanci waayo Madaxweynuhu warbixinta Xeer-ilaaliyaha Guud, wuxuu amrayaa inuu Xeer-ilaaliyaha Guud la noqdo dacwadiisa. Qaabilaadda diblomaasiyiinta shisheeyaha iyo ka qabashada waraaqaha aqoonsigooda Credentials. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Waajibaadka Muwaadinka iyo Ciqaabta Gudasho La’aanta.
Sidaas darteed, dawladdu waxay xil iska saaraysaa shaqo abuuris iyo tayaynta tababarada shaqaalaha. Xiilli kasta waxa ku soo kordhaya tiro xubno sharaf ah oo kala ah: Qodobadaan waa kuwa ka mid ah Tixda: Ma bannaana in muwaadinka Somaliland loo dhiibo dawlad shisheeye.
Dastuurka waxa saldhig u ah mabaadi’da Islaamka. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Awoodda Xeer-dejinta ee Golaha Wakiilada. Muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerku tilmaamayo wuxuu xaq u Ieeyahay in la doorto, waxna uu doorto. Taasi waxaa xigay dastuurka Somaliland ugu horeeyay, taas oo la ansixiyay ee shirka ee Beelaha Somaliland ee Hargeysa ee February Mushaharka iyo gunnada xubnaha Guddida Culimada xeer baa nidaaminaya.
Shaqaalaha kale ee Xoghaynta waxa shaqo gelinaya Xoghayaha Guud marka uu ka helo ogolaansho Shir-guddoonka.